Sina 2-Ply House Wrap orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
Ny hery matevina sy ny fofon'aina avo dia marika tena manan-danja indrindra ho an'ny ShiningWrap.
Lanja lamba: 55 ~ 75 gsm
Material: PP / PE
Lafatra 2 Lava: LDPP + HDPP na LDPE + HDPE
harato: 5 * 5/6 * 6/7 * 7/6 * 8/8 * 8 /
Fomba fanenona: Rano ny rano na lozomina
Color: Fotsy na isaky ny fangatahan'ny mpanjifa.
pirinty: Hatramin'ny fanontana 4 loko
Size: 3 'X 100' 3 'X 150' 9 'X 100' 9 'X 150' 9 'X 195' 10 'X 100' 10 'X 150' 10 'X 195'
: Azo atao ny manokan-tena
PP / PE tenona ShiningWrap miaro ny rindrina manohitra ny andro ratsy, maina ny maina. Rano maloto, manamboatra angovo ary tena mihetsika. Amin'ny fananganana, ny fihanaky ny rivotra sy ny hamandoana dia tsy azo avela foana ShiningPalst Housewarp dia marefo sy tsy azo tanterahina ary tsy azo anaovana ny toetr'andro izay manakana ny hamandoana, mamolavola hiditra ao anaty ary mamela ny rano avy ao ivelany.
Manomboka amin'ny fitrandrahana, isika dia mikarakara tsara ny tanety rehetra amin'ny alàlan'ny fampandehanana hatrany ny fitarihana sary / annealing mankany amin'ny fanatsarana.
Nohazaina tamin'ny fanenoman-tena nandroso mba hanaovana fehezam-boninkazo amin'ny fikosoham-borona fotsiny alohan'ny hisian'ny hafanana mandritra ny DIE-COATING. Mandritra izany fotoana izany, ny rafi-pandrefesana manokana natao dia manome antoka tsara ny malefaka aorian'ny fanakofana. Tsy ny fihenan'ny fihenam-bolo maharitra ihany fa koa famatorana tsaratsara kokoa.
Ny perforation tsara dia manome antoka fa avy eo ny fofonaina aorian'ny fanontana.
Famandrihana tsy tapaka
1. Fitiavana matevina eo amin'ny taratasy na ny vatolampy PP ary fatorana (Flat Pallets)
2. Palletization manokana (US na EN Standard Flat Pallets na Cré Pallets).
·Mateza: ShiningWrap dia lafatra faharoa / matevina / maharitra kokoa ary miady amin'ny toetr'andro. Satria mitandrina tsara ny kofehy mandritra ny fitrandrahana isika. Ny fiaretana matanjaka dia nanomboka nanomboka teo. Miampy ny teknolojia tenona tsara sy ny teknolojia, ny lamba dia mijanona ho hery tsara hatrany mandra-pahatongan'ny tananao.
·maivana: Nanana fananana maivana i Shiningwrap ka manamora mora kokoa ny mitondra sy mametraka.
· Permeable / Micro-Perforated: Ny dingana fihanahana dia hahazoana antoka fa ny ShiningWrap dia mamela ny setroka fanampiny hialana amin'ny atiny mba hisorohana ny fihary mihena amin'ny rivotra.
·Weather Resistant: Hatramin'ny niantombohan'ny fitrandrahana ny kofehy, manomboka miahy ny zazakely rehetra amin'ny alàlan'ny fampitaovana lehibe sy ny fanaovana sarin-tsary isika, ary manenona azy ireo amin'ny alàlan'ny firoboroboana mandroso, amin'ny alàlan'ny T-Die Coating mandra-pahavitan'izany, ary izany rehetra izany dia hiantoka ny fihenan'ny ala kely. , tsara / famatorana / tsimoka tsara. Ny fiarovana ny ivelany dia homena toky na dia mandritra ny rivotra mahery na ratsy dia ratsy.
·Azo atao ny mifehy tena:
Ny lakaoly mangatsiaka amin'ny lamosina dia manolotra mpanjifa fanampiny safidy izay mifehy tena. Hanampy ny hijanona ao an-trano na dia misy rivotra mahery sy rivo-mahery aza mandritra ny fananganana. Ary koa, manampy ny mpiasa hametraka izany mora kokoa.
·Tear Proof: Amin'ny maha teboka tena manan-danja azy, ny tanjaky ny ranomaso (fanoherana ny ranomaso be na dia mandritra ny fametrahana mahery setra aza) dia mila lanja ny serasera mandroso sy ny teknolojia famokarana mihamitaka, mpiasa manan-danja indrindra.
·Tsy tantera-drano: Tsy toy ny fehin-kibo antrano, ny fanenoman-tena ratsy dia miteraka lavaka maro ary manelanelana ny paompy. Shiningwrap dia manana kalitao tenona tsara izay mahatonga ny santimetatra amin'ny fahitana lamba vita amin'ny lamba.
·UV-mahatohitra: Izahay dia nanamboatra ny fitsaboana tsara indrindra UV sy stabilizer mba hiantohana ny fametrahana amin'ny fotoana maharitra UV sy ny fananganana maharitra.
Previous: 3-Ply Synthetic roofing Roofingina
Manaraka: Famoronana roofotsy azo vita